❤️ Instagram hainditenderi kupinda : Facebook - Facebook
Instagram inzvimbo ine simba yesocial media, inoshandiswa nemamiriyoni evanhu mazuva ese kutumira mafoto ekugadzira nemavhidhiyo uye kuona izvo shamwari uye vanhu vane simba. Mabhizinesi mazhinji anoshandisawo saiti kugovera zvemukati nevateveri vavo uye kukura bhizinesi ravo..
Zvinoshungurudza zvakanyanya kusakwanisa kubatana newako instagram account, asi chokwadi ndechekuti vanhu vazhinji vanosangana nemamiriro ezvinhu aya zuva nezuva. Pane zvakawanda zvinokwanisika tsananguro dzechiitiko ichi..
Vazhinji vanofurira, vatengesi nemabhizinesi vanoshandisa Instagram sepuratifomu yebhizinesi. Kana vasingakwanise kuwana maakaundi avo, zvinogona kukanganisa bhizinesi, social media kuvapo uye kunyange mari.
Sezvineiwo, kazhinji pane kugadzirisa kuri nyore kumatambudziko mazhinji. Mugwaro iri, iwe unowana ruzivo rwekuti ungabatanidza sei kune yako Instagram account.
Kana ukagamuchira meseji yezvikanganiso ichikuzivisa kuti kuedza kwako kubatana kwakundikana, sarudzo yako yekutanga kuisa zvakare password yako woedza zvakare. Kana zvisingashande, zvinoreva kuti pane rimwe dambudziko neakaundi yako.
Pakakundikana kuedza kwako kupinda, unogona kugamuchira imwe yemamwe mameseji ekukanganisa, dzimwe nguva yakananga kufoni yako uye dzimwe nguva kune yako email. Hapana anofarira kugamuchira meseji isingatarisirwe yekukanganisa, asi chakanakira ndechekuti meseji iyi inokupa chiratidzo chekuti sei watadza kubatana.
Heano mamwe eakajairika Instagram login kukundikana zviziviso:
ndine hurombo, paita dambudziko nechikumbiro chako.
zita Instagram mushandisi haana kuwanikwa.
Isu haikwanise kubatana neakaundi yako.
Ndapota tarisa zita rako rekushandisa woedza zvakare.
Against wakanganwa password ye “username” ?
Zita zita rekushandisa rawaisa harisi reakaundi.
Tisati tanyura mukugadzirisa nyaya idzi, ngatitangei kutarisa zvikonzero zvinogona kukonzera kukanganisa kwekubatanidza. Instagram mhosho mameseji anowanzo kukupa zano rakanaka nezve chingango konzeresa dambudziko uye mhinduro yaro..
Zvikonzero Zvinogona Kukanganisa Kubatana
Chikonzero chinowanzoitika chekutadza kupinda mukati ndechekuti waisa password isiriyo, izvo zvinoitika kazhinji. Inogona kunge iri nyore typo, kukanganisa pakunyora (kumusoro kana pasi), kana kunyange password isiriyo zvachose. Tarisa kuti password yako ndeyechokwadi, uye kana iri password dambudziko, shandisa password reset link yakapihwa na Instagram.
Instagram login zvikanganiso zvinowanzokonzereswa nekutanga kupinda kune mudziyo mutsva. Kana chikuva chisingazive mudziyo wauri kushandisa, inogona kukutadzisa kuiwana kusvika waita imwe ongororo.
Kunyangwe izvi zvingaita sezvisingafadzi uye zvisingakodzeri, iyi idanho rakakosha rekuchengetedza. Kana mumwe munhu akaedza kubira Instagram account yako nekupinda mukati vachishandisa yavo kifaa, danho iri rinogona kuimisa. Iyo yekuwedzera verification inovimbisa kuti chengetedzo uye kuvanzika kweakaundi yako vakachengetedzwa.
Dzimwe nyaya dzine chekuita nemudziyo dzinosanganisira kushandisa mudziyo wekare usingachatsigire Instagram app, pamwe nenguva isiriyo uye zuva marongero pamudziyo.
Dzimwe nguva, ndangariro kana dambudziko rehardware pafoni yako rinogona kukanganisa kushanda kweapp. Data uye Wi-Fi yekubatanidza inogona kunge iri kukanganisa, uye zvinogona kukonzera dambudziko rekutaurirana pakati pemudziyo wako uye Instagram server..
Chekupedzisira chinogoneka chikonzero chekutadza kupinda ndeye yako Instagram account kuvharwa kana kubviswa.. Unogona kunge wakazviita iwe pachako, kunyange netsaona. Zvinogona zvakare kuve kuti mumwe munhu akabira account yako kana Instagram platform yaive nechikonzero chekuvharisa yako kwenguva kuwana account yako.
Gwaro rekuti ungapinda sei kumashure mu Instagram account yako
Ino ndiyo nguva yekutarisa mhinduro dze Instagram login kutadza. Ukangowana meseji yekukanganisa uye uine mamwe mazano nezve chikonzero, unogona kuedza nzira dziri pasi apa.
Zvizhinji zveizvi zvinogadzirisa zvinokurumidza, asi zvimwe zvingada nguva shoma nenhamburiko kuti uone chinetso chacho uye kuwana mhinduro. Ungangoda kubata Instagram vatengi sevhisi kana kutsvaga yekunze app kuti ikubatsire..
Heano mamwe ekugadzirisa nekukurumidza anogona kukubatsira kugadzirisa dambudziko:
Imbozorora zvishoma uye funga nezve password yako
Kana iwe ukaedza kupinda zvakare neiyo password password, kumbomira kunogona kukubatsira kuyeuka chimwe chinhu nezve password yako. Kana zvisiri, ingo shandisa password reset link painstagram.
Batidza uye dzima mudziyo wako
Kutangazve kugadzirisa nekukurumidza kunowanzo shanda zvakanaka. Izvi zvinogona zvakare kugadzirisa nyaya dzekubatanidza pakati pechishandiso neseva yekushandisa. Kazhinji, patinoshandisa midziyo yedu zvakanyanya, Apps inogona kutanga kusashanda, saka edza danho iri kutanga.
Tarisa uone kubatana kwako
Kana data yefoni yako kana Wi-Fi yekubatanidza isina kubatika, haugone kupinda. Kazhinji, kubatana kwako kunopera iwe usina kana kuzviziva. Kubatana kusina simba kana kupindirana kunogona kukanganisawo kugona kwako kwekubatanidza. Iwe unogona kutangazve yako Wi-Fi router kana iwe ukawana meseji yekukanganisa nezve yekubatanidza kune server.
Gadzirisa nguva nemazuva emudziyo wako
Unogona kunge uri pamudziyo mutsva kana wakasiyana uine nguva isiriyo nemisi yakatarwa. Zvinogoneka zvakare kuti aya marongero akachinjwa nekukanganisa pane yako yakajairika kifaa.. Izvi zvikanganiso zvinokanganisa kugona kwako kupinda mu Instagram. Tarisa kana marongero ari echokwadi uye agadzirise kana zvichidikanwa. Iyo yakanakisa nzira ndeyekusarudza kugadzirisa otomatiki nguva uye zuva marongero.
Bvisa cache yeapp uye data
Kana kukanganisa kuchibva kune application pachayo, kuchenesa cache kazhinji kunogona kugadzirisa dambudziko. Panyaya iyi, unofanirwa kuenda kune zvigadziriso zvemudziyo. Muzvirongwa zveapp, unogona kusarudza Instagram uye sarudza sarudzo yekubvisa cache uye data. Iwe unogona zvakare kuedza kupinda kubva kuPC yako kana chimwe chishandiso kuti uone kana uchikwanisa kuwana account yako ipapo..
Iwo Instagram login mhinduro dzakakurukurwa pamusoro ndedzimwe dziri nyore uye dzinokurumidza kutenderedza.. Matambudziko mazhinji anogona kugadziriswa neizvi. Kana iwe uchiri kutadza kupinda kuaccount yako, ungangoda mhinduro yepamusoro.
Gadzirisa password yako
Unogona kuedza kuseta pasiwedhi yako kana usinga kwanise kurangarira iyo chaiyo. Zvinotora maminetsi mashoma, asi kazhinji inoshanda zvakanaka.
Imwe mhinduro yaunogona kuedza ndeye kugadzirisa iyo app. Kana app yako yapera, haichashandi sezvainofanira uye haina zvinhu zvitsva uye mabasa.
Pinda neakaundi yako yeFacebook
Iwe unogona zvakare kuedza kupinda neako Facebook account. Kana kuedza kwese uku kukakundikana, kubheja kwako kwakanyanya kubata Instagram uye kuvakumbira kuti vakubatsire kugadzirisa dambudziko reakaundi.